FOREX-Dollar Steadies After3Days of Losses As Trade Deal Hopes Dim | Myanmar Business Today
Home Business International FOREX-Dollar Steadies After3Days of Losses As Trade Deal Hopes Dim
Againstabasket of its rivals, the greenback was broadly steady at 97.84 after weakening more than 0.6 percent in the last three sessions. It had hitaone-month high of 98.45 on Nov. 13.
Elsewhere in the currency market, the Australian dollar fell 0.16 percent to $0.6799 and declined 0.26percent to 73.82 yen .
တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အတိုးနှုန်းများ လျှော့ချလိုက်သည့် အောက်တိုဘာလကုန် အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်‌အစည်း အဝေးထုတ် ပြန်ချက်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက စောင့် နေကြသောကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေး သုံးရက်ဆက်တိုက် ကျဆင်းခဲ့ပြီးနောက် အင်္ဂါနေ့တွင်တော့ အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ ဈေးသည့် ဈေးကွက်အတွင်းရှိ အခြားသော ငွေများနှင့်ငွေလဲလှယ်နှုန်း တည်ငြိမ်လာ သည်။
အပတ်စဉ်အချက်အလက်များအရ ကမ္ဘာ့ ကုမ္ပဏီကြီးများသည့် ¤င်းတို့၏ ဒေါ်လာများ ကို ‌အများအပြား ရောင်းချနေကြပြီး မူဝါဒ ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးရလဒ်က ဒေါ်လာဈေး များပြန်တက်လာစေနိုင်သည်ဟု စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများက ဆိုသည်။
အမေရိကန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံအကြား ကုန် သွယ်ရေး ကနဦးသဘောတူညီချက်ရရှိမည် ဟူသော မျှော်လင့်ချက်များ ပျက်ပြယ်သွားပြီး နောက်တွင် ဒေါ်လာဈေးကျလာခဲ့သည်။
ယခုလအတွင်းတွင်အမေရိကန်နှင့် တရုတ် တို့သည့် ¤င်းတို့၏ ၁၆လကြာ ကုန်သွယ်ရေး စစ်ပွဲအရှိန်လျှော့ရန်အတွက် ပထမအဆင့်ဟု ခေါ်သော စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးမည် ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ကြသော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ် တနင်္လာနေ့တွင်တော့ တရုတ် နိုင်ငံမှာအဆိုပါ ကုန်သွယ်ရေးစာချုပ် သဘောတူညီ‌မှုရရှိရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သိပ်မျှော်လင့်ချက်မရှိကြောင်း ဃြဃြ က သတင်းတင်ဆက်လိုက်ပြီးနောက်တွင် ယင်း မျှော်လင့်ချက်များ လျော့ကျသွားခဲ့သည်။
အခြားသော ဈေးကွက်အတွင်းရှိ ငွေကြေး များနှင့် လဲလှယ်နှုန်းတွင် အမေရိကန်ဒေါ် လာသည့် သုံးရက်ဆက်တိုက် သုညဒသမ၆ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းနေခဲ့ပြီးနောက်တွင် ၉၇ ဒသမ ၈၄ တွင် ငြိမ်နေသည်။
အခြားသော ငွေကြေးများအနေဖြင့် သြစ တြေးလျဒေါ်လာသည် တစ်ဒေါ်လာလျှင် ဝ ဒသမ ၆၇၉၉ အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့ ရောက်ရှိနေပြီး သုည ဒသမ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားသည်။ ထို့အပြင် သြ‌စတြေးလျ ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာလျှင် ၇၃ ဒသမ ၈၂ ယန်းဖြင့် ဝဒသမ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွား သည်။
SOURCESaikat Chatterjee (Reuters)
Previous articleApple, Intel File Antitrust Case Against Softbank-Owned Firm Over Patent Practices
Next articleGreek Economy to Grow 2.8% In 2020 On Investment, Lower Taxes, Budget Projects